Ifulethi liqukethe igumbi lokulala elinebhedi enkulu kunye nedesika ngasekunene kwefestile; Indawo yokuhlala enendawo yokutyela / ikhitshi kunye nebhedi yesofa ephindwe kabini.
Indlu yahlulwe ngomgangatho wayo ophezulu kwaye incasa, ingaphakathi emnandi, ethanda ukonwaba kunye nokuhlala kweshishini.
Indawo yokuhlala ikufuphi kakhulu kumbindi wedolophu kunye nemizuzu embalwa yokuhamba kuwo onke amakhubalo eGrudziadz.
Yindawo egqibeleleyo e-Ul. I-Rapackiego yenza zonke iisayithi ezinkulu ngaphakathi kohambo olufutshane okanye ukukhwela ngetram/ibhasi okanye imoto.